DEG DEG: Sh Roobow oo loo geeyay Madaxda DFS, MD Farmaajo oo Balanqaad usameeyay & Digniin ku socoto ciidamo Cadaan ah… | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
DEG DEG: Sh Roobow oo loo geeyay Madaxda DFS, MD Farmaajo oo Balanqaad usameeyay & Digniin ku socoto ciidamo Cadaan ah…
Wasiirka Gaashaandhigga dowladda Soomaaliya ayaa Roobow iyo ciidamadiisa kasoo ka xeeyay degmada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay kula dagaalamayeen AlShabaab.
Saraakiil la rumeysan karo ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu balan qaad cad usameeyay Sh Roobow taas oo ah inuusan wax xarig ah la kulmi doonin.
HOOS KA DHAGAYSO WARARKII UGU DAMBEEYAY
Sidoo kale, waxaa uu madaxweynuhu diiday in ciidamo cadaan ah loo gacan geliyo Roobow, isla markaana ay kaliya kiiskiisa wax ka qabanayaan ciidamada NISA.
Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif XASAN ayaa isna la filayaa inuu qeyb ka noqdo wadahadaladda, waxaana xog la helay ay sheegeysaa in wadaadka ciidamadiisa meel gaar ah la dajiyay.
Goordhow ayaa la filayaa inuu kasoo muuqdo warbaahinta dowladda si uu u cadeeyo inuu isaga baxay Shabaab isla markaana uu dowladda kala shaqeyn doono sidii Shabaab loola dagaalami lahaa.
Habeenadii lasoo dhaafay ayay socdeen kulamo xasaasi ah oo ay madaxda dowladda ugu diyaar garoobeysay soo dhaweynta Roobow iyo waxa laga yeelayo, taas ayaana keentay in loo diro Wasiirka Gaashaandhiga oo Koofur Galbeed kasoo jeeda, Taliye ku xigeenka NISA, Wasiiro katirsan Koofur Galbeed iyo xubno kale.